Kufuneka wenze ntoni ukuba iqabane lixoka | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 07/06/2021 22:00 | Ubudlelwane
Ayingabo bonke ubuxoki obufanayo kwaye ayifani ukuyenza msulwa, ukuyenza ngobubi kwaye usazi ukuba kuya kubangela ingozi enkulu komnye umntu. Kwimeko yesi sibini, ukuxoka okuphindaphindiweyo kunye nesiqhelo kuya kutshabalalisa elinye lamaxabiso abaluleke kakhulu kulo naluphi na ubudlelwane: ukuthembana.
Ngaphandle kokuthembela awunakho ukuxhasa naluphi na uhlobo lwezibini ezinokuthi zithathwe njengezisempilweni. Akunakuvunyelwa naphantsi kwazo naziphi na iimeko ukuba elinye lamaqela esibini sisebenzise ubuxoki rhoqo kwaye ukuba oku kuyenzeka, kufuneka kumiswe ngokukhawuleza.
1 Ubuxoki kwesi sibini
2 Kufuneka wenze ntoni ukuba iqabane liyaxoka
Ubuxoki kwesi sibini
Kuyinyani ukuba ubuxoki bukukhanya kwemini kwaye kwimeko yezibini oku akunjalo. Nangona kunjalo, ipesenti enkulu yolu buxoki kubandakanya ukushiya iinyani ezahlukeneyo ezinokunceda ukomeleza iqabane lakho. Yinto eyaziwa ngokuba bubuxoki obumhlophe kwaye bafuna ngaphezulu kwako konke ukunika ukhuseleko olukhulu kunye namandla kubudlelwane uqobo. Izinto ezahlukileyo ngokupheleleyo bubuxoki kwaye zibangela umonakalo omkhulu kwisibini, nokuba ukophula ixabiso elibaluleke njengokuthemba phakathi kwabantu ababini.
Kwimeko apho esi sibini sihlala sisebenzisa ubuxoki, kubalulekile ukubuza kwaye wazi ukuba kutheni esebenzisa ubuxoki kulwalamano. Ukusuka apha ukuya phambili, esi sibini sinoxanduva lokuthatha isigqibo sokuba ngaba bagqiba kwelokuba baqhubeke nobudlelwane obunjalo okanye ukuba akulifanelanga ithuba lesibini kwaye banqumle ilahleko yabo. Ngayiphi na imeko, awunakunyamezela ixoki lesifo njengoko ubudlelwane buya kuba yityhefu kwaye bekungayi kubakho luhlobo lokuthembana phakathi kwamaqela.
Ayifani kwaphela le nto ukuba esi sibini sixoke kube kanye okanye basenza ngaphandle komkhwa. Ukusuka apha, umntu okhohlisiweyo kufuneka azibuze ukuba ngaba omnye umntu ufanelekile ukuba athembeke kwaye uyafana na neenqobo ekufuneka zibekhona kubudlelwane obusempilweni.
Kuzo zonke iimeko, ingxoxo kunye nonxibelelwano kwizibini zibalulekile xa kuziwa ekusombululeni naluphi na uhlobo lweengxaki okanye ukungavisisani okunokwenzeka. Ngaphandle koku, kufuneka kubekho ukuzibophelela kubantu ababini, kuba kungenjalo yinto enokwenzeka kwakhona kwixesha elifutshane okanye eliphakathi.
Ukuzithemba komntu owenzakeleyo yenye into ekufuneka uyiqwalasele xa uxolela ubuxoki. Akululanga okanye kulula ukwakha ukuthembana okwaphukileyo kwaye ukuba imeko yeemvakalelo iphantsi kunokuba nzima ukubuyisa ubudlelwane ngeenyawo. Yiyo loo nto ukuzithemba kwiimeko ezinjalo kubaluleke kakhulu kwaye kubalulekile. Kufuneka uqiniseke kakhulu phambi kokuba uthathe inyathelo elibalulekileyo lokuxolela umntu oxokayo kwaye ubanike ithuba lesibini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Kufuneka wenze ntoni ukuba iqabane liyaxoka